Jiro manjelanjelatra ao amin'ny Skal: Skal Asia Congress 2019 misokatra
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Jiro manjelanjelatra ao amin'ny Skal: Skal Asia Congress 2019 misokatra
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Kongresin'ny Skal Asia faha-48 dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny Skal International Lavonne Wittman sy ireo olo-manan-kaja amin'ny fizahan-tany eo an-toerana.
Hoy ny filoha Lavonne: “Voninahitra ho ahy ny maha anisan'ny kongresinao ary reharehako ny maha-filoham-pirenena anao. Ny lohahevitry ny filoham-pirenena amin'ity taona ity dia ny tanjaka amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa.
“Liana ve ianao na manolo-tena hankafy ity dia miaraka amiko ity?
"Ny fananganana fikambanana matanjaka mifantoka amin'ny fiaraha-miasa dia singa iray lehibe hahombiazana. Ekipa miara-miasa, manana vina iraisana matanjaka ary tsy mitsahatra mitady fomba hanatsarana sy manampy an'ity fahombiazana ity, "hoy ny filoha Lavonne.
Manoloana ireo solontena miisa 300 dia nisy ny filaharam-be tamin'ny faneva narahina fampisehoana kolontsaina manaitra ary ny lanonana fanaovan-jiro nentin-drazana nentina nanamarihana ny fisokafan'ny kongresy.
Skal Asia miaraka amina mpikambana 2,200 mahery ao amin'ny Club 43, 28 voarindra amina komity nasionaly dimy sy mpikambana 15, ny Area Azia Skål no faritra maro karazana indrindra eto amin'ny tontolon'i Skål, hatrany Guam any amin'ny Oseana Pasifika dia 10,000 km mahery mankany Maurice ao amin'ny Ranomasimbe Indianina misy klioba any amin'ny firenena 19 eo anelanelany.
Nandritra ny lahateny fanokafana nataony dia nanambara ny filohan'ny faritra Azia Jano Mouawad fa mitombo hatrany ny isan'ny mpikambana ao Azia ary miforona klioba vaovao. Ny filoha Jano dia nanohy nisaotra ny mpikarakara ny kaongresy sy ny filohan'ny Skal Bangalore, Manoj Matthews tamin'ny asa vita tsara.
Ny kongresy telo andro dia hifarana amin'ny alahady 30 jona 2019.